Imandarmedia.com.np: सामूहिक बलात्कारको शिकार भएकी पूजालाई न्याय नदिने सुशीला कार्की !
News, Newspaper » सामूहिक बलात्कारको शिकार भएकी पूजालाई न्याय नदिने सुशीला कार्की !
काठमाडौं - प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की निलम्बनमा परेसँगै महिलाकर्मीहरु उनको पक्षमा सडकमा निस्किएका छन् । महिला अधिकारकर्मीले महिलामाथि अन्याय गरिएको भन्दै कार्कीका विरुद्धमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
तर, बोहराले देशमा राष्ट्रपति महिला, प्रधानन्यायाधीश महिला र सभामुख महिला हुँदासमेत न्याय पाइनन् । अझ, सुशीला कार्कीको कार्यकालमा पालै नपाइ आफ्नो मुद्दा ओझेल पारिएको गुनासो बोहराले गरेकी थिइन् । कार्कीले डिआइजी नवराज सिलवालले हालेको रिटमा सोही दिन सुनुवाइ गरि आदेशसमेत गर्न भ्याएकी थिइन् । यसै सन्दर्भलाई जोडेर कार्कीको आलोचना सामाजिक संजालमा हुने गरेको छ ।